webhu yekushandisa ekuyedza matipi
Kuru Qa Webhu Kunyorera Yekuyedza Matipi
Kuedzwa kwewebhu kwakasiyana nedesktop yekuyedza application. MuWebhu Kunyorera Kwayedza, isu tinowanzo kushandisa browser (mutengi) kukumbira webhusaiti kubva kune dura rewebhu nekutaurirana neserura pamusoro peHTTP kana HTTPS.
Izvo zvakakosha kuti, sevanoyedza, patinenge tichiverengerwa muWebhu Kuedza, isu tinofanira kunge tichiziva nezvakakosha zveHTTP kuti tinzwisise mashandiro anoita webhu kunyorera.
MuWebhu Kuedza, kunze kwekuyedza kushanda kweumwe neumwe akabatanidzwa zvinhu, mamwe emhando dzekuyedza senge Performance, Chengetedzo, Cross-browser uye Responsiveness izvo zvisinganyanyodiwa mukuedzwa kwekushandisa kwedesktop, zvinova zvinonyanya kukosha muWebhu Kunyorera Kuedzwa Izvi zvinodaro nekuti Webhu Zvikumbiro zvakavhurwa kune vazhinji vateereri saka mashandiro anofanira kuverengerwa.
Pamusoro pezvo Webhu Zvikumbiro zvinonyanya kubatwa nekuchengetedzwa senge DDos uye SQL Injection, uye kana webhusaiti yakanangwa, nguva yekuzorora inogona kudhura zvakanyanya, saka kukoshesa kukuru kunofanira kuiswa pakuedzwa kwekuchengetedza.
Webhu Kubvunzurudza Kuyedza
Mamwe mawebhusaiti ari kuvakwa vachishandisa webhu masevhisi. Izvi zvinopa mukana wevanoedza kuyedza webhu kunyorera muzvinhu zvakasarudzika pane kuzara kwakazara kwakabatana webhu.
Iwo mabhenefiti ekuyedza webhu masevhisi ari ega ndeaya:
Hapana bhurawuza rakabatanidzwa - Tinogona kutaurirana zvakananga newebhu sevhisi sekureba sekuziva kwedu kumagumo-poindi uye nematanho ekutumira.
Kurerutsa kugadzirisa - kana uchiyedza sevhisi webhu, kana tikasangana nenyaya, zviri nyore zvikuru kuwana iyo yakakonzera nyaya uye nekudaro kugadzirisa kunenge kuri kushoma kwekurwadziwa.
Kuwedzera kutonga - isu tinotungamira pamusoro pechikumbiro chatinoisa kune webhu saiti, kuti tikwanise kushandisa ese madhizaini ekukanganisa zviitiko zvewebhu webhu.
Tinogona kushandisa SopaUI chishandiso kuyedza webhu saiti.
Performance Performance Kwayedza kwakanyanya kukosha muWebhu Kuedza sezvo webhu kunyorera kuri pachena kune ingangoita yakakura nhamba yevateereri.
Kana tichiyedza webhu kunyorera, kwete chete isu tinofanirwa kuona kuti inoshanda webhusaiti yakagadzikana, isu zvakare tinofanirwa kuve nechokwadi chekuti application haina kupunzika kana yaiswa mutoro wakakura pane server.
Nehurombo, vanhu vazhinji vanokanganwa nezve kuyedzwa kwekuita kweiyo webhu kunyorera, kana kudzosera kumashure kuyedzwa pamberi pekusunungurwa izvo zvanonoka. Kana paine chimwe chinhu chakakanganisika zvakanyanya mukugadzirwa kana kodhi inogona kukanganisa mashandiro, hatingazive nezvazvo kusvikira zvanyanyisa.
Maitiro akanakisa ndeyekumhanyisa cheki yekuita nguva zhinji sekuyedza kudzoreredza bvunzo saka tine chivimbo chekuti mashandiro haana kudzoka sechikamu chekuchinja kune base code.
Jmeter chishandiso chakakurumbira chekuvhura mutoro chekuyedza chinogona kushandiswa kutarisa mashandiro enzvimbo. Inogona zvakare kuve yakabatanidzwa muCI server.
Kuyambuka-browser Webhu Kuyedza
Sezvo paine nhamba dzakasiyana dzemabhurawuza, tinofanirwa kuona kuti webhu yedu yekushandisa inoshanda sezvaitarisirwa pane ese (angangoita makuru, kureva Google Chrome, Mozilla Firefox neMicrosoft Internet Explorer), kwete kukanganwa Opera neSafari.
Sezvo nekuyedza kwese, tinofanirwa kuziva kuti ndeapi mabhurawuza uye neshanduro dzawo dzinotsigirwa neshanduro uye tobva taronga kuyedza nenzira kwayo.
Kuyedza zvese pane zvese bhurawuza kunogona kutora nguva yakawanda, ndosaka tinogona kushandisa otomatiki maturusi ekuona mashandiro pane akasiyana mabhurawuza.
Zvakare, kune epamhepo muchinjika bhurawuza ekuyedza maturusi ayo anoita kuti hupenyu huve nyore kune vanoedza kuita bvunzo dzavo pane akasiyana mabhurawuza.
Kutaura kubva pane zvakaitika kwauri, huwandu hwezvinhu zvine chekuita nebrowser vashoma uye zvakanyanya zvine hukama neshanduro dzekare dzemabhurawuza kana iyo CSS haina kupa nenzira kwayo kupa mamiriro ekugadzirisa.
Naizvozvo zvingangodaro zvisina basa kumhanyisa zviitiko zvese zvekuyedza mumabhurawuza ese sezvo zvingave zvichitora nguva (kunyangwe zvikaitwa otomatiki) kuwana zvishoma, uye mukana wechimwe chinhu chisiri kushanda zvakaderera.
Maitiro akanakisa ndeekumhanyisa kesi dzese dzekuyedza mubrowser imwe huru, wobva wasarudza mashoma ezviitiko zvakakosha uye woamhanyisa pane mamwe mabhurawuza.
Bvunzo kushandisa michina
Mazhinji emakambani anovandudza Webhu Zvikumbiro anoshanda mune yakasarudzika modhi yekuvandudza ine inoburitswa kuburitswa, saka kudikanwa kwekuwongorora nguva zhinji. MuWebhu Kuedza, Test Automation inogona kubatsira zvakanyanya nekuti inobvisa mutoro wekudzokorora basa.
Zvakare nekusimbisa mashandiro, isu tinogona zvakare kushandisa zvinyorwa zvoga kuti tibudise bvunzo dhata yatinoda panguva yeWebhu Kuedzwa.
Imwe nzira iyo otomatiki inogona kubatsira mukuyedza kuyedza zvishandiso senge Selenium WebDriver inogona kutora screenshots yeiyo chaiyo browser peji. Kana isu tichida kutarisa nemaziso kuwanda kwemapeji akawanda, i.e. isu tinoda kuziva kuti zvinyorwa zvemuno zvinoshandura sei pamapeji akasiyana ewebhu, isu tinokwanisa kushandisa chishandiso kuenda kuburikidza nemapeji uye kutora screenshots uye nekukurumidza kuratidza nemaziso.
Kuti uwane rumwe ruzivo, ndapota tarisa kune Kwayedza Automation Matipi uye Akanakisa Maitiro
Kuongorora Traffic yeHTTP
Kazhinji pane chikonzero chekuongorora traffic yeHTTP kubva kubhurawuza kuenda kumaseva ekudzika. Nekuongorora webhu traffic tinokwanisa kuchera pasi kune iyo ruzivo rwechimwe nechimwe chikumbiro uye mhinduro.
MuWebhu Kuyedza, kuongorora traffic yeHTTP kunonyanya kubatsira pakuyedza yechitatu bato yekutevera mateki, senge Google Analytics ma tag kana omniture ma tag pane ewebhu mapeji.
Kwete chete kuti tinga tarise ma tag akabata chaiwo maitiro, isu tinokwanisa kuyedza kuti zvikumbiro zvinodzingwa kuenda kune akakodzera echitatu bato masystem uye kuti isu tinowana mhinduro chaiyo, kazhinji mazana 200 OK kodhi yekupindura.
Kuti tikwanise kufungidzira uye kurekodha traffic yeHTTP isu tinofanirwa kushandisa chishandiso chakakodzera chinoita senge proxy uye inogona kuteerera kune zvikumbiro nemhinduro pakati pemutengi, kazhinji browser, uye maseva.
Heano mamwe maturusi anozivikanwa atinogona kushandisa kuongorora HTTP traffic:
Wireshark kana iwe uchida kuona zvese zviri kuitika mu network.
Fiddler kana iwe uchida kungo tarisa HTTP / s traffic.
Rarama HTTP Misoro kana iwe uri muFirefox uye uchida inokurumidza plugin kungoona misoro.
FireBug inogona kukuwanira iwe iyo ruzivo zvakare uye inopa Nice interface kana iwe uchishanda pane imwechete peji panguva yekusimudzira. Ini ndamboishandisa kuongorora AJAX transaction.
Inopindura Mawebhusaiti uye Kuyedza Kwenhare
Vanhu vazhinji vari kuwana mawebhusaiti kubva kunharembozha yavo. Izvi zvinoreva kuti Kuedzwa kweWebhu hakuchina kungobvumirwa kune mabhurawuza pamatafura. Isu tave kufanirwa kuyedza webhu kunyorera pane mobile mapuratifomu pamwe nematafura.
Kune maviri marudzi ewebhu ekushandisa emafoni nhare, iwo akagadzirwa nemaune epuratifomu, uye ayo 'anoteerera', kureva kuti pane vhezheni imwe chete yewebhu webhu yakavakirwa pakombuta uye nharembozha asi iyo application inoshandura uye iri inoratidzwa zvakasiyana zvichienderana nehukuru hwechigadzirwa.
Ose maviri marudzi anoda kuyedzwa pane nhare mbozha uye / kana simulators.
Zvimwe Zvakakosha zvinhu zveWebhu Kuedza
Munguva Yekuedzwa kweWebhu, pamwe nekuyedza kushanda, isu tinodawo kuongorora uye kwete kuganhurirwa ku:
UX uye Kurongeka
Vabereki, heino & maapos ekukiya vhoriyamu yevana vako Android foni kana piritsi saka Pokemon Go haikunde & apos; isingakutyairi nzungu
Akanakisa masheya ekuongorora maapplication uye majeti eApple
Live.ly app iri kudonhedzwa, mhenyu-kutenderera maficha anozobatanidzwa muMusical.ly
Yakanakisa Tenga 4th yaChikunguru kutengesa madhiri ane anotapira madhiri pane iPhone 8 uye iPhone 8 Plus